अल्बानियाका most सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शहरहरू यात्रा समाचार
मारिया जोस रोल्डन | | अल्बानिया, पर्यटन गन्तव्यहरू
तपाईं जहिले पनि अल्बानिया जान चाहानुहुन्छ होला तर कहाँ जानुहुन्छ वा कहाँ बस्नुहुन्न थाहा छैन। एक देश भ्रमण गर्न सजिलो छैन र सबै कुरा देख्न असम्भव छ जबसम्म तपाईंसँग आवास र यात्राको लागि भुक्तान गर्न धेरै फ्रि समय र पैसा छैन। त्यसैले आज म तपाईंसँग अल्बेनियाको सब भन्दा महत्वपूर्ण शहरहरूको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु।
एकचोटि तपाईलाई अल्बेनियामा सब भन्दा राम्रा शहरहरू थाहा भएपछि कुन चाहिं कुन भ्रमण गर्नको लागि उत्तम छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। केवल यस तरिकामा तपाईं राम्रो यात्रा व्यवस्थित गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, कुन शहरहरू तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्दछ र कुन भ्रमण गर्न तपाईं चाहानुहुन्छ र के तपाईं प्रत्येक केसमा हेर्न चाहानुहुन्छ भनेर जान्न। अल्बानियाका केहि महत्वपूर्ण शहरहरू सम्झना नगर्नुहोस्, र तपाईंको यात्रा व्यवस्थित गर्न नोट लिनुहोस्!
2 अल्बानियन रिभिएरा
ट्रियाना सन् १ 1920 २० देखि अल्बानियाको राजधानी भएको छ। शहर १ औं शताब्दीको सुरूमा बढ्न थाल्यो। यो शहरको नाम "थेरन्डा" शब्दबाट आएको हो जुन पुरानो ग्रीक र ल्याटिन स्रोतहरूमा उल्लेख गरिएको छ कि आदिवासीहरूले ते रनाट भन्ने गर्थे किनकि यो क्षेत्र हिमालको पानीका सामग्रीहरूको परिणामका रूपमा बनिएको थियो। वरपर
आज टिराना अल्बानियामा सब भन्दा बढी जनसंख्या भएको शहर हो र यो देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक र आर्थिक केन्द्र पनि हो। एड्रिएटिक सागर र दाती पहाडहरू शहर नजिक छ। यो समुद्रमा पुग्न कारबाट तपाईं लाई एक घण्टा भन्दा बढी लाग्दैन। त्यहाँ एक कृत्रिम तालको साथ पार्क पनि छ जुन सहरमा छ र त्यहाँका बासिन्दाहरू र पर्यटकहरूको पनि आनन्द लाग्छ।
त्यहाँ जान धेरै चीजहरू छन् जस्तै एथेम बे मस्जिद, सरकारी भवन, ट्याबकेभ पुल, पर्ट्रेला वा प्रेजा किल्ला, शहीदहरूको चिहान, कप्लान पाशा चिहान वा यसको कुनै पनि संग्रहालय ... र सबै महान इतिहासको साथ। र सांस्कृतिक स्थलचिन्ह।
देशको दक्षिणपश्चिममा त्यहाँ एक असहज तटरेखा छ जुन इटालियन रिभेरासँग तुलना गर्न सकिन्छ तर धेरैको लागि यो उत्तम छ किनभने यो शान्त र कम भीडभाड भएको छ। समुद्री तटहरूले तपाईंलाई हिड्नको लागि वा सनब्थमा आमन्त्रित गर्दछ तपाईंको छुट्टि आराम र मजा लिन। अरु के छ त त्यहाँ हालसालै नयाँ निर्माण होटलहरू छन् र आकर्षणहरू जसले तपाईंलाई महान महसुस गराउँदछन् र कहिले रमाईलो गर्नुहुन्न, यद्यपि तपाईं आराम गर्न सक्नुहुन्छ। यो छुट्टी बिताउन एक महान शहर हो।
यदि यो पर्याप्त भएन भने, ल्यान्डस्केप मूल हो र समुद्री तटहरूका पछाडि तपाईंले दर्शनीय पहाडहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं पक्कै पनि सँधै आफ्नो सम्झनामा राख्न चाहनुहुन्छ। ती पहाडहरूमा साना शहरहरू छन् जुन धेरै आकर्षणको साथ छ, जुन तपाईंलाई एक छनौट गर्न र छोटो यात्राको लागि आदर्श हो, तिनीहरूले तपाईंलाई निराश गर्दैनन्!
बेराट शहरलाई "एक हजार विन्डोजको शहर" को रूपमा चिनिन्छ किनभने फेकडेससँग ठूला विन्डोजहरू छन् र यसलाई संग्रहालय शहरको रूपमा घोषित गरिएको छ (१ 1961 in१ मा छानिएको)। यो मैदानको बीचमा ओसुम नदीमा अवस्थित छ। विगतमा महल निर्माण गरिएको थियो र यो पहाडमा उभिएको छ। पहाडीमा तपाईं मूल महललाई कालाजा भनेर चिनिनुहुन्छ। महलले धेरै चर्च र मस्जिदहरूको साथ एक जिल्ला समावेश गर्दछ र तपाइँको यात्रा मा एक यात्रा लायक लायक छ।
अनुहारको झ्यालहरूले शहरको डिजाइन देखाउँदछ। सेता घरहरु शहर को मूल उपस्थिति कायम राख्न भवनहरु बीच सूचीबद्ध छन्। यो संस्कृति र इतिहास प्रेमीहरु को लागी एक महान शहर हो।
सहरको वरपरले केहि साना शहरहरू र क्षेत्रहरू प्रस्ताव गर्दछ, तिनीहरूलाई यात्रामा पनि भ्रमण गर्न सकिन्छ किनकि तिनीहरूको राम्रो सौन्दर्य छ।
फियर शहर नजिकै, भ्लोरा शहर भित्र र अल्बानिया देशको बीचमा तपाईं अपोलोनिया भन्ने पुरानो शहर पाउन सक्नुहुन्छ। अपोलो देवताको नामको सम्मानमा। अपोलोनिया प्राचीन संसारको सब भन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण शहर थियो।
यद्यपि यो सहर हो जहाँ तपाईं बस्न सक्नुहुनेछ, यो तपाईंको यात्रामा भ्रमणको लागि लायक छ किनकि भग्नावशेषहरूले अझै पनि तिनीहरूलाई कायम गर्दछ र ती प्रभावशाली छन्। तिनीहरू त्यो शहरको वास्तविक महिमाको एक सानो टुक्रा देखाउँछन्। तपाईं यसको पुस्तकालयहरू, मन्दिरहरू, थिएटर र अन्य भवनहरू, साथै एक विजयी आर्क र ध्वस्त हवेलीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। पहाडबाट शहरको दृश्य प्रभावशाली छ ... यदि तपाईं यो ध्वस्त शहरको भ्रमण गर्नुभयो भने, तपाईंलाई कुनै पश्चाताप हुनेछैन, यो तपाईंलाई विगतमा पुर्‍याउने जस्तो हुनेछ।
अल्बेनियाली तटमा डुर्रेको ठूलो शहर देशको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह शहर हो। यो आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्र महत्त्वपूर्ण छैन, तर संस्कृति पनि महत्त्वपूर्ण पूँजी हो। महान सांस्कृतिक कार्यक्रम र चाडपर्व छ कि वर्ष भर मा ठाउँ लिन र धेरै व्यक्ति द्वारा भ्रमण गरीन्छ। थप रूपमा, शहरको एम्फीथिएटरले यी सबै घटनाहरूमा ठूलो भूमिका खेल्छ, किनकि यो शहरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आकर्षण हो।
एम्फीथिएटरले बिगतमा करीव २० हजार व्यक्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा समायोजन गर्न सक्दछ, र आज तपाईंसँग यस भ्रमण गर्ने अवसर छ। डुर्रे देशको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रहरु मध्ये एक हो र यदि त्यो पर्याप्त थिएन भने, यो एक महान संस्कृति र ईतिहास छ तपाईंलाई प्रस्ताव गर्न। थप रूपमा, तपाईंसँग सनब्थ र आराम गर्नको लागि सुन्दर समुद्र किनारहरू, र पार्टीहरू तपाईंलाई रमाइलो गर्न मनपर्दछ।
Gjirokastra दक्षिणी अल्बानिया मा शहर हो कि यूनेस्को द्वारा एक विश्व सांस्कृतिक विरासत को रूप मा चुनिएको थियो। कारण यो छ कि यो एक अद्वितीय वास्तुकला शैली छ, तपाईं मात्र यसको भवनहरु मा हेर्नु पर्छ यो महसुस गर्न को लागी। यसको शैलीलाई बाल्कन वास्तुकला भनिन्छ र यसले सानो ठुलो पत्थर महल घरहरू समावेश गर्दछ। ढु stones्गाले प्राचीन कालमा घरहरूको तापक्रम नियन्त्रण गर्थ्यो र आज तिनीहरू शहरको प्रतीक हो।
यस कारणले गर्दा यो शहरलाई "ढु stones्गाको शहर" पनि भनिन्छ। यो पहाडको छेउमा अवस्थित छ। Gjirokastra पनि धेरै सांस्कृतिक आकर्षण छ जस्तै संग्रहालयहरू, थिएटरहरू वा पूजा गर्ने ठाउँहरू। थप रूपमा, प्रत्येक years बर्षमा राष्ट्रिय लोकगीत महोत्सव शहरको महलमा आयोजित हुन्छ, त्यसैले यदि तपाईं यस शहरको भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईंलाई यस घटनासँग मेल खाने सल्लाह दिन्छु जसले तपाईंलाई निराश पार्दैन।
यी शहरहरू बाहेक तपाईंसँग अरू पनि छन् जो महान पनि छन्, तर यी केहीका साथ तपाईंले निश्चित रूपमा राम्रो यात्रा छनौट गर्नुपर्नेछ र राम्रो समय लिनुपर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » अल्बानिया » अल्बानियाको महत्त्वपूर्ण शहरहरू
पहिलो विषयवस्तु उपहारको रूपमा पाँच थिम पार्क